Bogga ugu weyn 10ka Qareen ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka | Xirfadaha Sharciga ee ugu sarreeya sanadka 2022
Ku shaqaynta garyaqaan ahaan waxay noqon kartaa mid aad u badan xirfad faa'iido leh haddii aad ku fiican tahay oo si habboon loo tababaray. Qareenadu waa mid ka mid ah shaqsiyaadka ugu mushaarka badan dunida shaqada. Eeg 10 -ka Qareen ee ugu Mushaarka Badan Adduunka.
Qareenku waa xirfadle, tababaran oo aqoon leh oo la oggol yahay oo ku dhaqma sharciga, qabta dacwadaha waxay siiyaan talo sharci sida qareenka sharciga, la -taliyaha, la -taliyaha, garyaqaanka, fulinta sharciga, ama adeegaha dadweynaha oo diyaarinaya, turjumaya, iyo dabaqaya sharciga.
Noqoshada qareenku waxay ku lug leedahay Geedi socod aad u badan oo ay ka mid yihiin akhriska, imtixaanka qorista iyo kuwa kale, kuwaas oo qaarkood yihiin 7 sano oo waxbarasho waqti-buuxa ah lagu qaadanayo machad sare oo ay aqoonsan yihiin Ururka Qareennada Mareykanka (ABA).
Habsocodyada qaarkood waa;
Dhamaystir Barnaamijka Shahaadada Bajlarka oo aad ku raaxaysato
Shahaadada bachelor -ka waa shuruudda waxbarasho ee ugu yar ee gelitaanka dugsiga sharciga.
Gudbitaanka sharciga la aqoonsan yahay Imtixaanka Ogolaanshaha Dugsiga.
Kahor intaan laguu gelin iskuul sharci, waa inaad ka gudubtaa imtixaanka gelitaanka dugsiga si laguu oggolaado.
Helitaanka shahaadada heerka koowaad
Ka dib gelitaanka dugsiga sharciga, waxaad mari doontaa tababarro iyo casharro kala duwan muddo afar sano ah si aad shahaadada koowaad ee jaamacadda uga hesho CGPA oo ah 3.0.
DHAAFTA BAARITAANKA BAR
Ka dib markaad haysato shahaadada Sharciga, waxaa lagaa rabaa inaad isku daydo oo aad gudubto imtixaan la yiraahdo BAR Exam.
Qaar ka mid ah anshaxa Qareenka ayaa ah;
La xiriirka xirfadlayaasha kale ee sharciga
Xirfadaha cilmi baarista
Waa in la maqlaa
SIDEE AYAA SHARCI -YAASHA UGU SAMEEYAAN LACAG?
Nidaamka Cadaaladda Dambiyada
Difaaca Dadweynaha ama Xeer -ilaaliye
Mas'uuliyadda badeecada iyo Dacwadda Waxqabadka Heerka
Isku -darka Shirkadaha iyo Qareenka Qaadashada
NOOCKA SHARCIGA SHARCIYADA IYO SHAQAALAHA
SHARCIYADA SHARCIGA SHAQADA
Qareenka shirkadu waajibaadkiisu waa inuu hubiyo sharcinimada inta ay dhexmarayaan laba qof ama ka badan iyo dadka kale. Shaqadoodu waa inay talo siiyaan oo falanqeeyaan arrimaha, ee ku saabsan xuquuqda sharciga iyo waajibaadka marka la wareejinayo Ganacsiga.
Mushaharkoodu wuxuu ka bilaabmaa $ 30,000 iyo $ 100,000 sanadkiiba, laakiin tani waxay kuxirantahay baaxadda shirkadda, khibradda, shahaadada, iyo kuwa kale.
SHAQAALAHA BUKAANKA BUKAANKA
Waajibaadka qareenka patent -ka ayaa ah inuu qiimeeyo waxa patent -ka ah iyo in kale, iyo arrimaha la xiriira naqshadaha iyo summadaha ganacsiga, in kasta oo ay si weyn ugu baahan yihiin hal -abuurayaasha shaqsiyeed, waxay ka caawiyaan shuruudaha sharciyeed ee aan muranka lahayn, qiimeynta shatiyada jira, iyo ka difaacidda maxkamadda kiisaska jebinta.
Celceliska mushaharka garyaqaan patent waa $ 129,500, sida laga soo xigtay PayScale.com.
MUSHAHARKA SHARCIGA DEMBIGA
Qareenka dambiilaha waajibaadkiisu waa inuu difaaco dadka, shakhsiyaadka, shirkadaha, iyo bulshada loo haysto dacwadaha ciqaabta ee maxkamadda.
Waxay baaraan kiisaska, waxay qabtaan waraysiyo, waxay dhisaan difaac, waxayna ka soo horjeedaan qorshayaasha, waxayna mararka qaarkood ka gorgortami karaan inay maxkamadda ka baxaan.
Celceliska mushaharka difaacayaasha dadweynaha waa $ 51, 000 oo ka mid ah shuraakada ayaa qaata ilaa $ 115,000.
Qareennada canshuurtu waxay u dhaqmaan sida ugu badan wakiillada shirkad, urur, ama shaqsi marka ay la macaamilayaan wakaaladaha canshuuraha federaalka, gobolka, iyo deegaanka. Mushaharkoodu waa qiyaastii $ 99,690.
Bilaabidda mushaharku waxay u muuqataa meel u dhexaysa $ 55,000 iyo $ 83,000; qareennada ku hadhay xeerka canshuuraha waxay filan karaan koror joogto ah oo ku yimaada dakhligooda sannadlaha ah marka xirfaddoodu sii socoto.
XEER ILAALINTA DHABTA AH
Mas'uuliyadda qareennada guryaha waa inay ka caawiyaan macaamiishooda xaalad kasta oo la xiriirta ganacsiga, arrimaha guryaha ma guurtada ah ama caqabadaha ku saabsan kiraystayaasha, deriska, aagagga iyo horumarinta hantida sidoo kale waxay hoos yimaadaan dalladda sharciga hantida ma guurtada ah.
Waxay sidoo kale wakiil uga yihiin macaamiishooda maxkamadda, laga yaabee inay tahay kiis milkiile guri oo kiraystaha ka dacweynaya kiro aan la bixin iyo kuwo kale.
Macaamilka hantida maguurtada ah ayaa had iyo jeer cuna geedi socod aad u adag sida dukumiintiyada sharciga ah, sidaa darteed inta badan qareennada hantida maguurtada ah ayaa lacag badan ku bixiya arimahan.
Qiyaasta mushaarka qareenka guryaha waa qiyaastii $ 90,125 laakiin waxay ku kala duwan tahay waayo -aragnimada iyo goobta.
SHARCIYADA QOYSKA QOYSKA
Waajibaadka qareennada qoysku waa inuu daryeelo arrimaha qoyska sida furriinka, qabanqaabada haynta, korsashada, heshiisyada guurka ka hor, iyo mararka qaarkood masruufka carruurta, xannaanaynta carruurta, iyo xadgudubka guriga.
Xaaladaha badankood, waxay la shaqeeyaan macmiisha si ay u buriyaan guurka waxayna ka caawiyaan kala qaybinta hantida.
Qiyaasta mushaharka qareenka qoyska waa $ 70,828. Qareennada qibrada leh ee qoyska ee qaybta gaarka loo leeyahay ayaa ah kuwa ugu mushaharka badan.
SHAQAALAHA SHAQAALAHA DHAWAAQAHA SHAKHSIGA
Qareennada dhaawaca shakhsi ahaaneed waxay la shaqeeyaan macaamiisha kuwaas oo ku eedeynaya waxyeello jireed ama maskaxeed oo ka dhalatay dayacaad ama khalad dhinac kale ah.
Haddii ay dhacdo shil ama dhaawac, Qareenada dhaawaca shakhsi ahaaneed wakiil u ah macaamiishooda si ay u helaan caddaalad iyo magdhow wixii khasaare ama dhibaato ah. Inta badan kiisaskaan waxay hoos yimaadaan aagga sharciga jirdilka.
Si looga caawiyo macaamiisha inay helaan magdhow wixii khasaare maaliyadeed ah, xanuun, iyo dhib ah oo ay la kulmeen dayacaad awgeed, qareennada dhaawaca shaqsiga ayaa wareysta macaamiisha, qiimeeya kiiskooda, aqoonsadaan oo baara arrimaha gaarka ah ee kiiska dacwoodaha.
Haddii dacwad -ooguhu sameeyo sheegasho ku lug leh dhaawaca jirka ama maskaxda, tani waxay ku dhacdaa qaybta sharciga dhaawaca shaqsiyeed. Shilalka baabuurta, dhaawacyada shaqada, iyo “siibasho iyo dhicid” ayaa ka mid ah kiisaska ugu badan ee ka jira goobtan.
Celceliska mushaharka sanadlaha ah ee qareenka dhaawaca shakhsi ahaaneed waa qiyaastii $ 73,000. Qareeno badan oo ku jira arimahan ma laha dakhli sanadeed oo go'an maadaama ay u shaqeeyaan khidmadaha lama filaanka ah.
Tan micnaheedu waa inay kasbadaan boqolkiiba heshiis kasta oo magdhaw ah oo dacwooduhu helo. Sida kiisaska intooda badan, qareennada u shaqeeya ururrada aan macaash doonka ahayn ama dawladda ayaa u muuqda kuwa ugu mushaharka yar, halka asxaabtooda shirkadaha sharciga ee waaweyn ay yihiin kuwa ugu mushaharka badan.
Immisa ayuu sameeyaa Garyaqaanka Qoyska
Noqoshada qareenka qoyska ma aha wax fudud ama mid adag. Muddadu waxay qaadataa 6-8 sano oo ay ku jirto shahaadada bachelorka. Waxbarashada, imtixaanaadka, ruqsad -siinta gobolka dhammaantood waxay door ku leeyihiin in loogu yeero baarka, ka dibna helidda shaqo waa wax kale oo wax laga qabto.
10ka Qareen Ee Ugu Mushaarka Badan Adduunka
10. Ana Quincoces - Qiimaha saafiga ah: $ 8 milyan
Haddii aad isku darto quruxda iyo maskaxda, natiijada ugu dambeysa waa Ana Quincoces. Quruxda cad ma aha gabadh cidhiidhi ku jirta; halkii, iyadu waa cunto kariye karti badan leh, bandhigga xiddigta dhabta ah, iyo dabcan, mid ka mid ah qareennada ugu mushaharka badan, oo hadda haysta lacag dhan $ 8 milyan.
Waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay Miami, waxay si dhaqso leh u adeegsatay xirfadeeda si ay isbadal ugu keento nolosheeda maadaama ay ku soo bandhigtay xirfadeeda eedaysanaha maxkamadda sharciga. Waqtigan xaadirka ah, iyadu waa qoraa guuleysta oo si ka sii wanaagsan ula dagaallama kiisaska maxkamadda.
9. Vernon Jordan - Qiimaha saafiga ah: $ 12 Milyan
Vernon Jordan wuxuu bilaabay xirfadiisii ​​u dhaqdhaqaaqida xuquuqda madaniga, wuxuuna noloshiisa iyo xirfadiisa u huray sidii uu isbadal ugu samayn lahaa bulshada. Qareenka gaboobay wuxuu ku dhashay Georgia wuxuuna ka qaatay shahaadada sharciga sharciga Jaamacadda Sharciga ee Jaamacadda Howard.
Tan iyo markii uu qalin -jabiyay, wuxuu ogaa ujeedka noloshiisa, ilaa iyo maantana, wuxuu naftiisa u huray sidii uu u gaari lahaa go'aanno la xiriira takoorka isirka ee Georgia. Waqtigan xaadirka ah, wuxuu ku fadhiyaa lacag dhan $ 12 milyan.
8. Thomas Mesereau - Qiimaha saafiga ah: $ 25 Milyan
Haddii aad ka warqabto caannimada Michael Jackson, markaa waa inaad ogaataa Thomas Mesereau. Wuxuu ku difaacay macmiilkiisii ​​caanka ahaa, Mr. Jackson, kiiska faraxumaynta carruurta oo dib ugu soo noqdey 2005tii.
Wuxuu sidoo kale door muhiim ah ka qaatay baaritaanka kufsiga ee Mike Tyson. Xishoodkiisa iyo qiyamkiisa dadnimo ayaa hoos loo dhigayaa maadaama uu hadda taagan yahay $ 25 milyan.
Waxaan u baahanahay rag badan sida Thomas Mesereau, gaar ahaan, haddii ay tahay inaan dunida daaweynno oo aan ka dhigno meel ka wanaagsan (sida Micheal Jackson uu si sax ah u maleeyay).
7. Erin Brockovich - Lacagta saafiga ah: $ 42 Milyan
Haddii magaca laftiisu uusan garaacin gambaleel, markaa malaha dagaalkeeda bay'ada ayaa dhici doonta. Waqtigan xaadirka ah, saacad dhan 42 milyan oo doollar, Erin Brockovich wuxuu si firfircoon ula dagaallamayay bay'ada oo ka soo horjeeday ururrada si loo hubiyo in deegaanku helo caddaaladdiisa.
Qaar ka mid ah kiisaskeedii caanka ahaa waxay ka soo horjeeday shirkadda Gaaska Baasifigga, oo dib ugu soo noqotay 1993. Waxaa kaloo jiray filim iyada ku salaysan oo la odhan jiray Erin Brockovich, halkaas oo Julia Roberts ay kaalin hoggaamineed ka qaadatay.
6. John Branca - Lacagta saafiga ah: $ 50 Milyan
Hagaag, haddii lahaanshaha qiimahiisu yahay $ 50 milyan lagu tiriyo liiska qareennada ugu dakhliga badan, markaa John Branca waxaa hubaal ah in lagu tiriyo 10-ka ugu sarreeya.
Khibradiisa dhinaca sharciga madadaalada iyo sharciga hantida ma guurtada ah ayaa macaamiishiisa aad ugu farxay sanadihii la soo dhaafay.
John wuxuu shahaadada sharciga ka qaatay Dugsiga Sharciga ee UCLA. Waxa uu ka soo jeedaa gobolka buuqa badan ee New York; inkastoo, wuxuu u guuray California isagoo 11 jir ah.
5. Robert Shapiro - Lacagta Hantida: $ 50 Milyan
Waa hagaag, xitaa dadka caanka ah waxay u baahan yihiin qareenno, waana halka uu ka soo galo Robert Shapiro, oo ah nin haysta lacag dhan $ 50 milyan.
Wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray gobolka New Jersey; si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii uu qaatay shahaadada sharciga, wuxuu difaacay shaqsiyaad caan ah iyo ciyaartooy ka tirsan maxkamadda sharciga. Mid ka mid ah kiisaska uu ugu caansan yahay qaadista waa orodyahanka OJ Simpson.
4. Roy Black - Lacagta saafiga ah: $ 65 Milyan
Roy Black wuxuu hadda haystaa lacag dhan $ 65 milyan wuxuuna caan ku yahay dacwadaha ciqaabta ee uu ku difaacay macaamiishiisa William Kennedy Smith iyo Rush Limbaugh.
Isagoo ka tagaya sumcadda dambiyada dhabta ah ayaa muujinaya, wuxuu naftiisa ku caan baxay la -dagaallanka kiisaska dambiyada dhammaan Mareykanka oo dhan
Wuxuu ku dhashay kuna soo barbaaray New York, qareenka hufan diyaar uma aha inuu wax walba ku joojiyo si kiiskiisu u noqdo kiis guulaysan.
3. Willie Gary - Lacagta saafiga ah: $ 100 Milyan
Ha raacin sifooyinkiisa fudud iyo shakhsiyadda si sahlan loo akhriyi karo. Kaliya maahan inuu yahay af -haye dhiirrigeliya, laakiin Willie Gary wuxuu kaloo kasbaday magac naftiisa xagga ganacsiga iyo sharciga.
Asal ahaan wuxuu ka yimid Georgia, wuxuu sharciga ka qalin jabiyay Jaamacadda Dhexe ee North Carolina. Tan iyo markaas, dib looma eegin 100-ka milyan ee ragga ah, ee sii hoggaamiya shirkadda Martin County ee ugu horreysa abid ee qareennada.
2. Joe Jamail Jr. - Lacagta Hantida: $ 1.5 Billion
Markay timaaddo inaad noqoto mid dagaal badan, wax xanbaarsan, iyo sidoo kale si wanaagsan loo hadlo, Joe Jamail Jr. ayaa kuu doodaya.
Xeeladihiisii ​​Maxkamadda Sare ma aha oo kaliya inay kasbadeen sumcad khatar ah laakiin waxay kaloo ka dhigeen inuu xukumo quluubta garsoorayaasha iyo macaamiisha. Waa hubaal inuu yahay qof u qalma inuu haysto lacag dhan $ 1.5 bilyan.
1. Richard Scruggs - Qiimaha saafiga ah: $ 1.7 Bilyan
Rumayso ama ha rumaysan, laakiin waxaa jira sababta Richard Scruggs loogu dhawaaqay "Boqorka Torts".
Waqtigan xaadirka ah, hantidiisa saafiga ah waxay ku dhowdahay $ 1.7 bilyan, oo la siiyay waayo -aragnimadiisa hodanka ah ee xagga sharciga tubaakada, wuxuu si aad ah ugu xardhay magac naftiisa qaybta sharciga ee firfircoon.
Xirfadda sharcigu waa shaqo wanaagsan oo sumcad leh, waxoogaa tayo iyo dulqaad ah ayaa loo baahan yahay si loo cabbiro.
therichest.com/rich-powerful/waxaa- ah- 10-kii-ugu-fiicnaa- ee- garyaqaannada-ku-jira-usa/
30ka Shirkadood ee Kaaliyayaasha Ugu Wanaagsan oo leh Rajo Wanaagsan 2022
Dib -u -eegista Cilmi -baarista Panda 2022: Cilmi -baarista Panda ma Xalaalbaa mise waa Fadeexad Qarsoodi ah?
10ka Sawir -qaade ee ugu mushaarka badan 2022
Sawir qaadashadu waxay leedahay rajooyin waaweyn gaar ahaan haddii aad diyaar u tahay inaad shaqada geliso. Dhiirigelin ahaan…
10ka Shaqo ee ugu mushaarka badan ee Injineerinka ah: Injineerrada ugu mushaarka badan.
Su'aalaha sida kuwa injineerada ugu mushaharka badan ama maxay yihiin shaqooyinka injineernimada ugu mushaharka badan waa runtii…
Waxaa jira dad aad u yar oo dhihi kara ma aysan maqal waxa laga sameeyay gudaha…
Muhiimadda caafimaadka wanaagsani gorgortan kama geli karo qof kasta oo weligiis hore u bukooday, taas oo ficil ahaan…